पुरुषहरूको लागि साइडबर्नका प्रकारहरू | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 12/06/2022 10:40 | काटिएको, व्यक्तिगत हेरचाह, फेसन, कपाल शैली, प्रचलनहरू
हामी कुनै पनि कपालमा ढिलो गर्न पूर्ण स्वतन्त्रताको युगमा बाँचिरहेका छौं। के निश्चित छ कि हेयरस्टाइलहरूमा फेसनहरू छोडिएको छैन र हामी यसमा केन्द्रित छौं तिनीहरूले साइडबर्नलाई कसरी समर्थन गर्नुपर्छ। पुरुषहरूको लागि साइडबर्नका प्रकारहरू मुख्य रूपमा निर्भर हुन्छन् तिनीहरू इतिहासमा कसरी विकसित भएका छन् र मुख्य रूपमा व्यक्तिको आकार।
Sideburns इतिहास भरि तिनीहरूले दिएका छन् व्यक्तिको बारेमा धेरै जानकारी जसले लगाएको थियो। यसरी हेर्दा कपालको स्टाइललाई ध्यानमा राखेर बनाउँछ कुनै प्रकारको सामाजिक विभेद र आर्थिक वा बौद्धिक पनि।
Sideburns बिर्सिएको छैन, यो हो पुरुष कपाल काट्ने मा एक आधारभूत भाग। आज त्यहाँ अधिक र अधिक मनपर्नेहरू छन् जसमा पिनको समाप्ति एक विशिष्ट आकार अनुरूप हुनुपर्छ। यद्यपि, यो शरीरको यो क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ यो कपाल को लागी एक प्रमुख टुक्रा हो, यस तरिकाले यसले तपाईंको कटलाई धेरै मनपराउनेछ।
1 साइडबर्न के हो?
2 चौडाइ द्वारा साइडबर्न
3 यसको आकार को कारण
4 साइडबर्न को उचाई द्वारा
साइडबर्न के हो?
साइडबर्न भनेको कपालको क्षेत्र हो टाउको को छेउ मा स्थित छ र दाह्री संग टाउको माथि जोड्नुहोस्। यसको लम्बाइ र घनत्व कपाल को समाप्त मा निर्भर हुनेछ वा विशेषज्ञ र त्यो अनुहारको लागि एक विशिष्ट छवि पुन: सिर्जना गर्न हेयरस्टाइललाई दिइने अन्तिम फिनिश कहाँ हुनेछ।
चौडाइ द्वारा साइडबर्न
यी साइडबर्न फराकिलो वा धेरै चौडा हुन्छ, तिनीहरू धेरै आकर्षक छन् र जहाँ यसले अनुहारको छेउमा ठूलो ठाउँ सिर्जना गर्दछ। विशेष गरी यो सिर्जना गरिएको पिन को एक प्रकार हो साहसी पुरुषहरूको लागि त्यसैले तिनीहरू सधैं बोक्नुपर्छ व्यवस्थित र परिष्कृत।
तपाईंसँग हुन सक्छ प्राकृतिक चौडाइ, दिईएको छ कि यसको मर्मत धेरै चरम बन्दैन, त्यसैले अन्तमा धेरै सरल रूप सिर्जना गर्नुहोस्, तर स्थिर। कपाल काट्ने धेरै पतन हुन्छ र सामान्यतया साइडबर्नको यो शैलीको साथ हुन्छ।
अर्को प्रकारको चौडा मन्दिर देखिन्छ जुन एक हो केहि राम्रो र सामान्यतया एक उपस्थिति दिनुहोस् धेरै अधिक प्राकृतिक र शैली। यसको मर्मतका लागि सामान्यतया धेरै समर्पण चाहिन्छ ताकि यसको डिजाइन अक्षुण्ण रहोस्।
यसको आकार को कारण
शिखर पिन। यसको आफ्नै आकार छ तल औंल्याए। यसको आकार धेरै विशिष्ट छ र धेरै अवस्थामा यो धेरै आकर्षक र आकर्षक हुन्छ। मानिसहरू मा आफ्नो बाटो धेरै राम्रो महसुस गर्नुहोस् फराकिलो अनुहार संग र यसलाई लगाउने जो कोहीलाई रकर शैली प्रदान गर्नुहोस्।
आयताकार। यो सबैभन्दा क्लासिक हो र हामी सामान्यतया देख्न प्रयोग गरिन्छ। यसको काट आयताकार छ र यो दाह्री तिर अपमानित आउँछ। यो लगाउने एक स्टाइलिश तरिका हो।
लामो र राम्रो। पुरुषहरु को लागी ए लामो अनुहार यो एक उत्तम कट हो। दाह्रीसँग मिल्दा यसको आकार साँघुरो हुन्छ, तर शिखरमा अन्त्य नगरी।
एल आकारको यो फारम धेरै विशेष छ र सेलिब्रेटीहरूमा व्यापक रूपमा देखिन्छ जसले आफूलाई ठोस र असाधारण व्यक्तित्व दिन रिसोर्ट गर्दछ। हामीसँग एल्विस प्रेस्लीको उदाहरण छ। निस्सन्देह, यसको आकार यसको L-आकारको आधारमा धेरै अद्वितीय छ, र यसको समाप्ति दाह्रीसँग मर्ज हुनेछ र दाह्री आफैंले यो विशेषता आकार बनाउन मद्दत गर्नेछ।
ज्वालामुखी मन्दिरहरू। तिनीहरू अत्यन्त चौडा मन्दिरहरू हुन् र चरम अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया विशेष अवसरहरूमा प्रयोग गरिन्छ, किनकि त्यहाँ धेरै थोरै हिम्मत गर्छन्। यसको आकारaछ सहरी चरित्र र धेरै उल्लेखनीय छन्.
साइडबर्न को उचाई द्वारा
लोब को स्तर मा। यो साइडबर्नको सबैभन्दा क्लासिक प्रकार हो, ती व्यक्तिहरूका लागि जो आफ्नो छविमा बाहिर खडा हुन र सामान्य अनुहारको विशेषताहरू कायम राख्न चाहँदैनन्। यो फारम संग केहि सही र सुरुचिपूर्ण बोकिएको छ।
धेरै छोटो। यस प्रकारको साइडबर्नको साथ, तिनीहरूलाई धेरै राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि धेरै चिन्तित हुनु आवश्यक छैन। यसको मर्मतसम्भार धेरै सरल छ तिनीहरू कुनै पनि प्रकारको हेयरस्टाइलमा अनुकूल हुन्छन्। गोलो अनुहारहरूमा तिनीहरू धेरै चापलूसी हुन्छन् किनभने यसले छविको संरचनाको ख्याल राख्छ जुन प्रक्षेपित गरिएको छ।
कानको स्तरमा। तिनीहरू भेट्ने पिन हुन् मध्यवर्ती उचाइमा। तिनीहरू सुरुचिपूर्ण हेरचाह प्रदान गर्छन् र प्रायः एक क्लासिक हुन्छन्, किनकि तिनीहरू धेरै अनुहारहरूमा राम्रो देखिन्छन्।
हराइरहेको वा उल्टो पिन। पिनको आकार लगभग अस्तित्वहीन छ। यो कपालको समान स्तरमा सेभ गरिएको छ, तर केवल ती केसहरूमा जहाँ कपाल पूर्ण रूपमा अन्डर कट तरिकाले काँडिएको छ, तर बज कट शैली, लम्बाइमा छोटो। साइडबर्न तलबाट सुरु हुनेछ जहाँ यो दाढी कपालसँग मिल्छ, र माथितिर फिक्का हुनेछ र सावधानीपूर्वक गायब हुनेछ।
पिन को प्रकार छनोट के हो हाम्रो छवि र व्यक्तित्व निर्धारण गर्नेछ। यदि तपाइँसँग विभिन्न कट मोडेलहरूलाई समर्थन गर्ने अनुहार छ भने, पहिले नै वर्णन गरिएका केहीसँग प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। धेरै कपाल काटेको साइडबर्न जस्तै सबै विशेषताहरूको सेट हुनेछ जसले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कटको शैलीलाई समेट्छ। दाह्री र साइडबर्नको चरम हेरचाह गर्न त्यहाँ ट्यूटोरियलहरू छन् जसले सिफारिस गर्नेछ तपाईको हेरचाहको लागि उत्तम उत्पादनहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषहरूको लागि साइडबर्नका प्रकारहरू
के महिलाहरु खौरिएका पुरुष मन पराउँछन्?